Jabuuti oo ka diiday Kenya inay uga Tanaasusho Kursi lagu dhibaatayn karo Somalia | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Jabuuti oo ka diiday Kenya inay uga Tanaasusho Kursi lagu dhibaatayn karo Somalia
Muqdisho ( Kalshaale ) Dawladda Jabuuti ayaa ka biyo diiday in ay Kenya uga tanaasusho xubinimadda aan joogtada ahayn ee Golaha Ammaanka Qaramadda Midoobay, sidda uu ku waramayo wargeyska afka dheer Daily Nation.
Dalalkan kawada tirsan Geeska qaaradda Afrika ayaa aad ugu loolamaya jagadaan, oo la filayo in Golaha Guud ee UN-ka uu u coddeeyo bisha June, iyadda oo cod-bixinta ugu dambeysay loo muddeeyay 21 August.
Dowladahan ayaa waxay wadaan dedaaladii ugu dambeeyay oo ay ku hananayaan xilkaasi aadka muhiimka u ah, iyaga oo taageero waydiisanaya wadamada ay xulafadda la yihiin ee Jamciyadda Qurumaha Ka Dhaxeysa.
Guuleystaha xilkan ayaa wuxuu u baahan in uu helo codad gaaraya saddex meelmood laba dalool oo ah wadamadda qaybta ah ururka ay ku mideysan yihiin dalalka dunida.
Midkood Kenya iyo Jabuuti, dhinacii kusoo baxa xilkan ayaa wuxuu golahaasi xubin ka ahaan doonaa inta u dhaxeysa 2021 illaa iyo sanadka xiga ee 2022.
Faa’iidooyinka dheeraad ah ee ay leedahay kamid noqoshada golahan ayaa waxaa kamid ah jaan-goynta Siyaasadda, Nabadda iyo Ammaanka guud ahaan caalamka.